အကယ်၍ သင်အမြစ်တွယ်နေတယ်ဆိုရင် Android Pay ကအလုပ်မလုပ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာရှာဖွေပါ။ | Androidsis
အကယ်၍ သင်အမြစ်တွယ်နေတယ်ဆိုရင် Android Pay ကအလုပ်မလုပ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာရှာဖွေပါ။
Cristina Torres နေရာချထားပုံ | | Android Root, Android application များ
Android Pay က Android အတွက်ငွေပေးချေမှုများအတွက်တော်လှန်ရေးပုံသေနည်းဖြစ်ကတိပေး။ အမှန်မှာ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည် Google Wallet တွင်အောင်မြင်မှုများစွာမရှိဘဲကြိုးစားပြီးဖြစ်သော်လည်းအရာများသည်ထို အချိန်မှစ၍ အပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်မှာမှန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့အထိသိသောအရာများက၎င်းကိုကြည့်ကောင်းသည်ဟုပြသသည်၊ သို့သော်အရာအားလုံးသည်ထင်ရသည့်အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်စောင့်ဆိုင်းရ ဦး မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ XDA Developers ဖိုရမ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးမှတ်ချက်များကငွေပေးချေမှုအသစ်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် rooted terminal နှင့်မကိုက်ညီကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြခဲ့သည်။
၎င်းသည်အချက်အလက်များကိုအလွန်အကျွံမျှော်လင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂူးဂဲလ်၏သာဓကမျှသာဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်သူများအတွက်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသည့်အကြောင်းအရင်းကိုတရားဝင်ဖော်ပြထားသည်။ တကယ်တော့ XDA Developers Photo မှာဒီအကြောင်းကိုပြသနေတဲ့မှတ်ချက်များဟာစက်ရုပ်ကမ္ဘာ၏အပြင်ဘက်မှအသုံးပြုသူတစ် ဦး မှမဟုတ်ဘဲဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါတယ် အဖြေကိုဂူဂဲလ်အတွက်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ကပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သူပြောခဲ့တာသည်ကောလာဟလမျှသာမဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရမည်။ ဒါဟာသေချာပါတယ်။ အခုဘာကြောင့်ယုတ္တိတန်တာလဲ Android Pay က root ကိုမထောက်ပံ့ဘူး?
တစ် ဦး က ဦး စားပေး, ထိုအချက်ကိုငါတို့အထင်ရပေလိမ့်မည် Google က root ကိုသုံးတဲ့ terminal အားလုံးကိုပိတ်ချင်တယ် ဂူဂဲလ် Pay ကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ချက်သည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ jailbreak ကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာ Apple လိုကုမ္ပဏီမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတာတစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။ အုပ်ချုပ်မှုမှခွင့်မပြုသောအရာကိုပိတ်ပင်ရန်မျှသာကြိုးပမ်းမှု။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သတိရရမည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုက်ဆံအိတ်အစားထိုးအကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေပေးချေမှုကိရိယာတစ်ခုအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်လုံခြုံရေးသည်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်လာသည်။ ထိုသဘောမျိုးဖြင့်၎င်းသည်သာစိတ်ကူးတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်မသေချာလျှင်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုသင်ရှာနိုင်သည်။
အသစ်လျှောက်လွှာ Google Pay ကိုအစားထိုးမည့် Android Pay၎င်းသည်ယခင်နှင့်မတူခြားနားသောနည်းလမ်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ NFC နှင့်ငွေပေးချေရာတွင်အနည်းဆုံးလုံခြုံရေးစံနှုန်းများကိုစစ်ဆေးရန် CTS လိုက်ဖက်မှုစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်သည်။ ယခင်ဗားရှင်းတွင်ကဒ်၏ virtualization ကိုနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ပြီး၎င်းအချက်အလက်များကိုဂူဂဲလ်သို့သာသီးသန့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကာကွယ်မှုသည် ပို၍ ကြီးသည်၊ သို့သော်တောင်းဆိုမှုများလည်းရှိသည်။ ထိုအကြောင်းရင်းကြောင့် Google သည်၎င်း၏ပေးချေမှုအက်ပလီကေးရှင်းတွင် root လုပ်ခြင်းသည်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်ငွေပေးချေမှုများသည်တိုးတက်နေပြီကိုမမေ့ပါနှင့်၊ ဝေးလံခေါင်သီသောအနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အားနေရာတိုင်းတွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်စပိန်နိုင်ငံတွင်ဤနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။ ယခင်ကတင်ပြခဲ့သောအခြားသူများမည်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။ နိုင်ငံတကာတွင်အောင်မြင်ခဲ့သနည်း - ဥပမာ Apple Pay ပြိုင်ဆိုင်မှုကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလိမ့်မည်။ အများဆုံးဂိမ်း။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့၊ အဲဒါကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုငါတို့သိပြီးဖုန်းကနေတိုက်ရိုက် NFC connection နဲ့ငွေပေးချေနိုင်သူတွေကိုမနာလိုလိမ့်မယ်။ ¿သင်၏မိုဘိုင်းမှ Android Pay ကိုသုံးရန် root ကိုဖယ်လိုက်သည်?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » လဲ tutorial » Android Root » အကယ်၍ သင်အမြစ်တွယ်နေတယ်ဆိုရင် Android Pay ကအလုပ်မလုပ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာရှာဖွေပါ။
အိုး !!! ငါမအိပ်တော့ဘူး !!! လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့်ငွေပေးချေရန်အမြစ်ကိုစွန့်လွှတ်ပါ။ ဟားဟား